राप्रपाको ३१ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व, काे–काे भए अध्यक्ष ? « Deshko News
राप्रपाको ३१ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व, काे–काे भए अध्यक्ष ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज भएको जिल्ला अधिवेशनमा ३१ जिल्लाको परिणाम प्राप्त भएको छ । प्राप्त परिणामअनुसार काठमाडौँ र भक्तपुरको अध्यक्षमा क्रमशः नवराज सिङ्खडा र दिनेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा जिल्ला कार्यसमिति निर्वा्चित भएका छन् ।
ललितपुरको मत गणना जारी रहेकाले परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, मनाङमा दीपक गुरुङ, डोल्पामा योगेन्द्र शाही, हुम्लामा कालीबहादुर शाही, धनकुटामा कुमारबहादुर थापा, भोजपुरमा डा सुरेश बस्नेत, चितवनमा बद्री तिमिल्सिना, गुल्मीमा वसन्तविक्रम पाण्डे, तनहुँमा विनोद घर्ती, झापामा अमरबहादुर विष्ट र सङ्खुवासभामा पदमकेशर कार्की निर्वा्चित हुनुभएको छ ।
सबै जिल्लामा एकै दिनमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ७४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बारामा भने आज अधिवेशन हुन सकेन ।
मनाङको जिल्ला अधिवेशन भने काठमाडौँमा गरिएको थियो । उक्त अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले दुई पार्टीको एकतापछि अहिले कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह आएको बताउनुभयो ।
पार्टीको आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने भएको छ ।